Tag: Alaab guri
Marka dadku i weydiiyaan saadaalin, waxaan si caadi ah ugu tilmaamaa qof kale. Anigu ma ihi qof mustaqbal doon ah, laakiin waxaan heystaa rikoor wanaagsan oo wanaagsan oo aan ku arko sida horumarka tikniyoolajiyadu u saameyn doono dhaqanka iibsiga. Mid ka mid ah tikniyoolajiyadda aan si aamusnaan ah uga aamusay ayaa noqotay xaqiiqda la kordhiyay iyo xaqiiqda dalwaddii. Dhammaantood way fiican yihiin, laakiin waxaan aaminsanahay inaan weli dhowr sano ka fogaanno isticmaalka wax ku oolka ah. Haddii aad tahay dukaanka tafaariiqda, in kastoo, waan tegayaa